Imibuzo evame ukubuzwa - iZhongnan Import and Export Co., Ltd.
I-International Trade Mart (Isifunda 1)
I-International Trade Mart (Isifunda 2)
I-International Trade Mart (Isifunda 3)
I-International Trade Mart (Isifunda 4)
I-International Trade Mart (Isifunda 5)
Ingabe uyakuqinisekisa ukulethwa okuphephile nokuphephile kwemikhiqizo?
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakisha ukuthekelisa kwekhwalithi ephezulu. Siphinde sisebenzise ukupakisha okuyingozi okukhethekile kwezimpahla eziyingozi kanye nabaqinisekisi bokugcina abandayo abagunyaziwe bezinto ezizwela ukushisa. Ukupakisha okunguchwepheshe kanye nezidingo zokupakisha ezingejwayelekile kungahle kutholakale imali eyengeziwe.
Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi. Sihlala sikulungele ukukusiza.
Ikheli: Igumbi 2602, Unit 2, Isakhiwo 3,
Isikhungo Sokuhweba Emhlabeni, Idolobha laseYiwu
Ucingo: isikhathi: 13819962128
YIWU, China, May 12, 2020 / PRNewswire / ...
umkhankaso izikhuthazi ukuphakamisa imoto sa ...
IZhongnan Import and Export Co, Ltd. yayiyi ...